iOS 11 ကနေ iOS 10.3.3 ကိုအဆင့်မြှင့်နည်း အိုင်ဖုန်းသတင်း
iOS 11 မှ iOS 10.3.3 ကိုအဆင့်မြှင့်တင်နည်း
ကျွန်ုပ်ယခင်ဆောင်းပါး၌ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း iOS 11 ကို ၂၄ နာရီအကြာတွင်လိုက်ဖက်သောထုတ်ကုန်များ၏ ၁၀.၀၁% တွင်တွေ့ရသည်။ ထိုပမာဏသည်ယခင် iOS ဗားရှင်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိသိသာသာကျဆင်းသွားသည်။ အကယ်၍ သင်သည်အခြားအသုံးပြုသူများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကြည့်ရှုရန်စောင့်ဆိုင်းခြင်းမရှိဘဲအဆင့်မြှင့်တင်ပြီးပါကသင်၏စက်သည်ပုံမှန်ကဲ့သို့အလုပ်လုပ်ခြင်းမရှိကြောင်းသင်မြင်တွေ့ရပါက Apple က၎င်းကိုလက်မှတ်ထိုးခြင်းမပြုမီ iOS 10,01 သို့ပြန်သွားရန်မျှော်လင့်နိုင်သည်။ iOS 24 ၏ပထမဆုံး update သည်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များပြသနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
ပထမ ဦး စွာ၊ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်သန့်ရှင်းသောတပ်ဆင်မှုကိုမလုပ်ဆောင်ပါက၊ iPhone မှပါဝင်သောအရာအားလုံးကိုခြစ်ရာကနေဖျက်ပစ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပေါ်တွင်စုဆောင်းထားသည့်အမှိုက်သရိုက်အားလုံးသည်၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုသတိရပါ။ Apple ကဆက်လက်လက်မှတ်ထိုးနေဆဲဖြစ်သောယခင် iOS ဗားရှင်းသို့မပြေးမီ၎င်းရှုထောင့်ကိုစစ်ဆေးပြီးစစ်ဆေးသင့်သည်။ ဒါပေမယ့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့နည်းလမ်းမရှိရင် iOS 10.3.3 ကိုဘယ်လိုပြန်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြပေးပါလိမ့်မယ်
iOS 10.3.3 ကနေ iOS 11 ကိုဘယ်လိုပြန်သွားမလဲ
ပထမ ဦး စွာ web သို့သွားရမည် ipsw.me y iOS version 10.3.3 ကိုကျွန်ုပ်တို့ install လုပ်လိုသည့် device နှင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။ ဤဖိုင်တွင် ipsw extension ရှိသည်၊ ပစ်မှတ်ထားသည့်စက်ပေါ် မူတည်၍ ၂ GB ကျော်ကျော်လိမ့်မည်။
ထိုအခါငါ iTunes ကိုသွားနှင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ကို Mac (သို့) PC နဲ့ချိတ်လိုက်ပါ.
နောက်တစ်ဆင့်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သွားရမည် စက်ပစ္စည်းကိုကိုယ်စားပြုအိုင်ကွန် iTunes မှပေးထားသောရွေးစရာများထဲမှ icon တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ချိတ်ဆက်ထားပြီ။
ကျနော်တို့မျက်နှာပြင်၏ညာဘက်အခြမ်းကိုသွားနှင့် Search update ကိုကလစ်နှိပ်ပါ အောက်ပါသော့ချက်ပေါင်းစပ်မှုနှင့်အတူ
Mac သည်ဆိုလျှင် Option ခလုတ်ကို နှိပ်၍ ထို option ကိုကျွန်ုပ်တို့နှိပ်ရမည်။
အကယ်၍ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို Windows PC မှကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ပါက Check for updates ကိုနှိပ်သောအခါ shift key (Shift) ကိုနှိပ်ပါ။
နောက်တစ်ခုပြရမယ် ipsw ဖိုင်ကိုရွေးချယ်ပါ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ download လုပ်ပြီးပြီဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iOS ကို » iOS 10 » iOS 11 မှ iOS 10.3.3 ကိုအဆင့်မြှင့်တင်နည်း
ignacio Miranda ဟုသူကပြောသည်
IOS 11 ကိုမွမ်းမံခဲ့တဲ့နေ့ကကျွန်တော့် iPhone6ကအရမ်းနှေးနေပြီးအရာအားလုံးကိုလုပ်ပြီးပြီ
ignacio miranda သို့ပြန်သွားရန်
IOS11 ကို update လုပ်သည့်နေ့ကကျွန်ုပ်၏ iPhone6သည်အလွန်နှေးကွေးပြီး OS အသစ်အတွက်တကယ့်ကိုဒုက္ခရောက်သည်။
Juan Fco ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏ iPhone တွင် IOS 11 ပါ ၀ င်သည်။ ပထမဆုံး beta ကတည်းကကျွန်ုပ်နှေးသည်မဟုတ်။ နောက်ဆုံးဗားရှင်းထွက်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက်သန့်ရှင်းသောတပ်ဆင်မှုတစ်ခုပြုလုပ်သည်။ သန့်ရှင်းသောတပ်ဆင်ခြင်း။
Juan Fco သို့အကြောင်းပြန်ပါ
iOS ၏အဓိကမူကွဲတစ်ခုစီအတွက်များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်ပြန်လည်ပြုပြင်မှုများပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ ယခုတွင် Apple က iTunes AppStore နှင့် .ipa နှင့်ဖုန်းမြည်သံများကို Mac / pc မှထပ်တူပြုခြင်းကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၌ရှိသောအက်ပလီကေးရှင်းများမှစက်မှ 54 gb ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းပါဝင်သောပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း။
သူတို့ကဒါကိုမယုံပုံရ iTunes ကိုသုံးပြီးဒေါင်းလုပ်ချပြီးတဲ့ applications တွေကို App Store မှာသွားစရာမလိုဘဲကူးယူပြီးကူးယူခဲ့တယ်လို့ ၀ န်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Apple ကြိုက်တဲ့နည်းလမ်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။
ကောင်းပြီ၊ ဒါကရှက်စရာပါ။ ငါကဲ့သို့သောသုံးစွဲသူများအတွက်အဓိကပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း iOS တစ်ခုချင်းစီအတွက်များသောအားဖြင့်ဤကဲ့သို့သောသုံးစွဲသူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အက်ပလီကေးရှင်းများစွာရှိသည်၊ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်ယခုပင်လျှင်မသက်မသာဖြစ်သည် (သင့် iPhone နှင့်အခြား iPad သို့မဟုတ်အခြား iOS ထုတ်ကုန်များရှိပါက)
မေးခွန်း၊ သင်သည်တေးဂီတအပလီကေးရှင်းနှင့်ပြproblemsနာမရှိသလား။ ငါ iPhone 11s Plus နှစ်ခုကို iOS6သို့အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့ပြီး၎င်းတို့အနက်မှမည်သည့်အရာမျှ Music app ကိုအသုံးမပြုပါ။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်ဖွင့်သောအခါစက္ကန့်အနည်းငယ်မျှဖွင့်ထားပြီးနောက်ပိတ်လိုက်သည်။ ငါအရာအားလုံးကိုကြိုးစားပြီးပြီ။ ငါ့အတွက်အလုပ်လုပ်တော့မည့်နည်းလမ်းမရှိ။
အကယ်၍ ၎င်းကသင့်ကိုပြောပြပါကသင်၏ပုံစံနှင့်ကိုက်ညီသောမူကွဲကိုသင်ဒေါင်းလုပ်ချလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အခြားတရားမျှတမှုမရှိပါ။
IOS 11 နှင့်ကျွန်တော်သတိပြုမိသည်က၊ ငါ bluethoo နှင့် Wifi ကို control center မှပိတ်ထားသောအခါ၎င်းတို့သည်ဆက်တင်တွင်တက်နေပြီးဘက်ထရီများစွာစားသုံးသည်။ IOS 11 ဟာအရမ်းများလွန်းတယ်။
၎င်းတို့သည်အခြားမည်သည့်ကိရိယာကိုမဆိုဆက်သွယ်ခြင်းကိုတားဆီးရန်တက်ကြွနေဆဲဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အကယ်၍ သင်သည် Apple Watch သို့မဟုတ် AirPods ကိုအသုံးပြုနေပါကသင် ဆက်၍ သုံးနိုင်သည့်ဆက်သွယ်မှုကိုမဆုံးရှုံးပါကဗားရှင်းပြnotနာမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည် Apple လိုလားသည်။
ယောက်ျားတွေ၊ ဒါကိုလုပ်ဖို့သတိထားပါ၊ ငါ ios 10 ကိုသွားဖို့ကြိုးစားနေတယ်။ ငါပြီးသွားရင်မှားသွားတယ်။ iPhone ကိုမွမ်းမံလို့မရဘူး။ စကရင်ကမှေးမှိန်သွားတယ်။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး mode၊ ကံကောင်းထောက်မစွာကျွန်ုပ်၏အချက်အလက်အားလုံးကိုမဆုံးရှုံးပါကကျွန်ုပ်တွင် backup ရှိသည်။ ငါအိုင်တီလုပ်ဖို့အကြံပြုကြဘူး
မင်္ဂလာပါဖိုရမ်၏မိတ်ဆွေများ၊ ကျွန်ုပ် ios 10.3.3 ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူပြီးသည်။ ပြီးပြည့်စုံပါသည်။ ငါ့မှာ iPhone7ရှိတယ်၊ ဂျီမေးလ်ဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုပ်ချလိုက်တယ်။ ငါ ios 11 ကိုစမ်းကြည့်ပြီးလုပ်ဆောင်ချက်အသစ်ကအရမ်းကောင်းပုံရတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါဆက်မနေတော့ဘူးဆိုတာကဘက်ထရီသုံးစွဲမှုပဲ။ ငါအသစ်တစ်ခုကိုသူတို့ထဲမှာမြင့်မားတဲ့ဘက်ထရီသုံးစွဲမှုပြtheနာကိုဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါတယ် ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည် iOS 10.3.3, CHILE မှကြိုဆိုပါတယ်။ ဒီကြေကွဲဖွယ်ဖြစ်ရပ်မှာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့မက္ကဆီကိုအစ်ကိုတွေအတွက်အားသာချက်…အများကြီးအားသာချက် !!!!
ဟယ်လို!! ကျွန်ုပ်၌ပြaနာတစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အဆင့်အားလုံးကိုမှန်ကန်စွာလိုက်နာခဲ့ပါသည်။ သို့သော်၎င်းသည်မွမ်းမံပြီးပါကအမည်မသိအမှားတစ်ခု (အမှား ၂၆) ရှိပြီး၎င်းသည်ဆက်လက်မလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်မိုဘိုင်းသည် update bar တွင်တည်ရှိပြီးမည်သည့်အခါမျှတိုးတက်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါ၊ ကျွန်ုပ်က၎င်းကိုပြုပြင်ချင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် iOS 26 ကိုလုံးဝမကြိုက်ပါ။ ကျွန်ုပ်တွင် iphone 11 ရှိသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ဟယ်လို! ကိုယ့်ရဲ့ iPhone 5s ကို GSM version နဲ့အဆင့်မြှင့်တင်လိုက်တာနဲ့အမှားတစ်ခုမှတ်မိသွားတယ်။ ငါ iTunes ကို update လုပ်ပြီး version ကိုငါ့ရဲ့ဆဲလ်ဖုန်းနဲ့ကိုက်ညီအောင်လုပ်ထားတယ်။ ဒါနဲ့ဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့လဲမသိဘူး ... အကြံဥာဏ်တွေရှိလား။ iOS 10 ကိုပြန်သွားဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
Andres Narvaez ဟုသူကပြောသည်
အမှားကသင်အဲဒါကို update လုပ်ဖို့ပေးတယ်၊ ဒါကြောင့်သင်အမှားတစ်ခုပေးပါလိမ့်မယ်၊ သော့ပေါင်းစပ်ပြီးပြန်ယူရန်ဖိုင်ကိုရှာဖွေရပါမယ်၊
မင်းမှန်တယ်၊ ကျွန်ုပ်သည်အောက်ဖော်ပြပါညွှန်ကြားချက်များကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းရန်အတွက်စိတ်ကူးမရှိဘဲနှင့်အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့သည်။ အဆင့်မြှင့်တင်မှုနှင့်အတူကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဖုန်းအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ။ သတိထားရမှာကကျွန်ုပ်၏ backup ကို iTunes သို့မဟုတ် iCloud မှ install လုပ်ခွင့်မပြုကြောင်းသတိပြုပါ။ ကျွန်ုပ် install လုပ်ထားသော version (10.0.3) သည်လက်ရှိ (11) ထက်အသက်ကြီးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
အပေါ်မှာရေးခဲ့တဲ့သူနဲ့ထပ်တူဖြစ်ခဲ့တာလည်းငါနဲ့ကြုံခဲ့ရတယ်။ ကျွန်တော့်ဆဲလ်ဖန်သားပြင်ပေါ်က update bar ဟာအဆုံးအထိဆက်ရှိနေပြီးအဲ့ဒီကနေမထွက်ပါဘူး။ ငါအကူအညီနဲ့တန်ဖိုးထားတယ်။
ဝီလျံ Barajas ဟုသူကပြောသည်
Iphone 6S ရှိသူများအနေဖြင့်၊ IOS 11 မှ ၁၀.၃.၃.၃ ကိုသက်ဆိုင်ရာသော့ပေါင်းစပ်မှုအောက်ရှိ "Restore" ခလုတ်မှအဆင့်သို့လျှော့ချပါ။ အကယ်၍ "Search for Update" မှပြုလုပ်ပါက "Unknown error 10.3.3" ကိုပစ်လိမ့်မည်။ ။ မင်္ဂလာပါ
ဝီလျံ Barajas ကိုပြန်ပြောပါ
ငါ ios 10.3.3 မှ file ကို download လုပ်တယ်၊ iphone ကို iTunes နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး update ကို key sequence နဲ့အတူထားတယ်။ ငါ download လုပ်ထားသော file ကို select လုပ်ပြီးပြသနာမရှိဘဲ download လုပ်ပြီး update လုပ်သည် (အမှားတစ်ခုလုံးသည်လုံးဝဖြစ်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်)၊ တင်ဘားတစ်ခုပြီးဆုံးသွားသောအခါအိုင်ဖုန်းတွင်အိုင်ဖုန်းသည်“ အိုင်ဖုန်းသည်အောင်မြင်စွာအဆင့်မြှင့်ပြီးပြီ ဖြစ်၍ ပြန်လည်စတင်နေသည်” ဟူသောနိမိတ်လက္ခဏာပေါ်လာသည်။ အဲဒါကိုမဖြုတ်ပါနဲ့။ ဒါကြောင့်ငါကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ပေမယ့် iPhone ကိုပန်းသီး၏မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအစဉ်အမြဲနေ၏! အခုတော့ပုံမှန်အားဖြင့်ဘယ်လိုဖွင့်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူး။ ကျေးဇူးပြုပြီးကူညီပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
(ငါရှင်းပါတယ်၊ ဒါက iphone7ဖြစ်တယ်)
သင်အဆင့်များကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မလိုက်နာပါ ဖုန်းကို DFU mode ထဲပြန်ထည့်ပြီးအဆင့်တွေအားလုံးလုပ်ရပါမယ်။
ငါဘယ်မှာမှားတာလဲ ခြေလှမ်းတွေကိုအာရုံစိုက်ပါ၊ ယခုပုံ
ကိုယ့်စက်ရုံကအဲဒါကိုပြန်ယူပြီးအဲဒါကို backup တစ်ခုပြန်လုပ်ပေးလိုက်တယ်။ အနည်းဆုံးတော့ငါလိုချင်တဲ့ ios 10.3.3 ကိုပြန်သွားခဲ့တယ်။
အရေးကြီးသောအချက်ကိုအလေးအနက်ထားသင့်သည်။ * .IPSW ကိုတပ်ဆင်ထားသည့်စက်ပစ္စည်းအချက်အလက်များ၏အရန်သင့်သိမ်းဆည်းမှုမပါဘဲထည့်သွင်းထားပါကအဆိုပါအချက်အလက်သည်ပျောက်ဆုံးသွားလိမ့်မည်။ လုပ်ငန်းစဉ်အရ၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံလိမ့်မည်ပုံဖြစ်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် iphone 6s ဖြင့်ပြုလုပ်ပြီးပြီးပြည့်စုံစွာအလုပ်လုပ်သည်
ဤသင်ခန်းစာတွင်ရှင်းပြထားသည့်အတိုင်းမလုပ်ပါနှင့်၊ သင်ပထမ ဦး ဆုံး iTunes သို့မဟုတ် icloud ဖြင့်အရန်တစ်ခုကိုပြုလုပ်ရမည်၊ ထို့နောက် PC ရှိ Shift ခလုတ်ဖြင့်ယခင်ကကျွန်ုပ်တို့ download လုပ်ထားသောဖိုင်ကိုပြန်လည်ရယူရန်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ၊ ပြီးနောက်မိတ္တူ၊
iOS6ပါသော iphone 11.0.1 ကို ၁၀.၃.၃ သို့ပြန်သွားနိုင်ပါသလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
နေသမျှကာလပတ်လုံး Apple ကလက်မှတ်ထိုးအဖြစ်ဟုတ်ကဲ့
မင်္ဂလာပါ၊ ၁၀.၃.၃ jailbreak လုပ်နိုင်ပါသလား။ ၎င်းသည်ဗားရှင်း ၉ ထည့်သွင်းထားသောအိုင်ပက်အတွက်ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Lore pedraza ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏ iPhone6ကို ၁၁.၀.၀ ဗားရှင်း ၁၁.၁.၁ နှင့်ယခု ၁၁.၀.၂ ဖြင့်အဆင့်မြှင့်တင်လိုက်သည်။ ဆဲလ်ဖုန်းနှေးနေပြီး wpp၊ စာရေးစဉ်နှေးသည့်အချိန် fbk၊ ကျွန်ုပ် wifi နှင့် bluethoot ကိုသက်ဝင်စေပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ မောက်အခါ manzanita ၏သူတို့လျှော့စျေး update ကိုလွှတ်ပေးမည်နည်း သူတို့ကဒီအမှု၌နောက်ဆုံးဗားရှင်း 11.0.0 မှစက်ကိရိယာများကိုပျက်စီး
Lore pedraza အားပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်၏မော်ဒယ်အတွက် iOS 10.3.3 ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီး iTunes ပြီးဆုံးသွားသောအခါအမှားတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းနှင့်သီအိုရီအရ iOS 10.3.3 အတွက် download စာမျက်နှာတွင် iTunes အတွက်အလုပ်မလုပ်ဟုဆိုခဲ့သည်။ ဒါဆို iPhone ကို 10 နဲ့ဘယ်လိုပြန်ထားမလဲ။
အမှား ၃၁၉၄၊ အမှား ၁၇ (သို့) "ဤစက်သည်တောင်းဆိုထားသောတည်ဆောက်မှုအတွက်မသင့်လျော်ပါ")
ios 11 မှ 10 ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ပြီးသားရှိပါသလား။
မနေ့ကငါကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ငါအမှားတစ်ခုရှိခဲ့တယ်။ အဲဒါကိုချိတ်ထားလို့မရဘူး၊ အဲဒါဘယ်တော့မှမတိုးတက်ဘူး၊ ကြည့်ရသည်မှာ၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်တော့ပါ
Update: အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၎င်းသည်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းဖြစ်သည်၊ မွမ်းမံခြင်းမဟုတ်ပါ။ iPhone 6S ကိုစမ်းသပ်ပြီး 11.0.2 ကနေ 10.3.3 အထိအဆင့်လျှော့ချသည်
ဒီနေ့ iphone 10.3.3 နှင့်ဝဘ်ပေါ်မှ version6ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။ ဤမှတ်ချက်သည် download file တွင်ဖြစ်သည်
ဒီ firmware ကိုလက်မှတ်ထိုးမထားပါ။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည် iTunes တွင် ပြန်၍ မရနိုင်ပါ။
တစ်စုံတစ် ဦး နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီးသူသည်လည်းထပ်တူထပ်မျှပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်၏ iphone 5s ကို Wi-Fi၊ မိုဘိုင်းဒေတာသို့မဟုတ် iTunes ပရိုဂရမ်ဖြင့်မဖွင့်နိုင်ပါ။ တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်ဘာလုပ်နိုင်သည်ကိုသိတယ်၊ ၎င်းကို ios 11.0 သို့အဆင့်မြှင့်ပြီးယခုအထိကျွန်ုပ်မသုံးနိုင်ပါ။
ဒီမှာစိတ်ကူးမရှိတဲ့သူကမင်းပဲ။ အကယ်၍ ၎င်းသည်သင့်အားအမည်မသိအမှားတစ်ခုပေးလျှင်သင်အမှားတစ်ခုခုပြုလုပ်မိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်စာဖတ်ခြင်းကောင်းသည်၊ ဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြထားသည့်အရာများကိုလုပ်သည်ဟုတ်၊ မလုပ်သည်ကိုကြည့်ကြစို့၊ ၎င်းကိုမည်သို့လုပ်ရမည်ကိုမသိလျှင်ဝေဖန်ခြင်းမဟုတ်ပါ။
ဟယ်လို! ငါ iPhone6ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်ကြိုးစားနေသည်။ ၎င်းသည်အမှား ၃၁၉၄ ကိုပြသည်။ ကျွန်ုပ်သည် Shift + Restore နှင့်သော့ချက်ချိတ်ဆက်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ၁၀.၃.၃ မှဖိုင်ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်သတင်းအချက်အလက်များကိုထုတ်ယူနေသည့်ဘားတစ်ခုကိုဖွင့်ပြီး၎င်းကိုချက်ချင်းထည့်သွင်းရန်နှင့်အမှားအယွင်းရှိသည်။ မျက်နှာပြင်။
ငါအလွန်အကျွံဘက်ထရီသုံးစွဲမှုနေမကောင်းဘူး ... တဖြည်းဖြည်းငါပင်မှအသုံးပြုခဲ့ကြပါပြီ။ ၁၁ ကိုကြည့်လိုက်ရင်မင်းကငါ့ကိုဘယ်လိုပို့လဲဆိုတာသိအောင်ကြိုးစားမယ်။ ၁၀.၃.၃ ကိုပြန်ချင်ရင်ငါဘာလုပ်ရမလဲ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် Iphone 5S ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းအဆင့်ဆင့်ကိုလိုက်ပြီး iTunes မှတစ်ဆင့် package ကိုထုတ်ယူသောအခါ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားတူညီသောအမှားတစ်ခုဖြစ်စေသည်။ 3194. ကျွန်ုပ်ဘာအမှားလုပ်မိလဲ။ သူ့ကိုငါပြန်ထားပြီ၊ ဒါပေမဲ့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူး။
ဒံယလေက Carrasco ဟုသူကပြောသည်
iOS 10.3.3 ကိုပြန်သွားနိုင်သေးလား။ ကျွန်ုပ်ဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါသည်။ သို့သော်၎င်းကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။ သို့သော် Apple သည်ယခင် ios ဗားရှင်းများကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့သောကြောင့်၎င်းကို ပြန်၍ မရပါကပုံရသည်။ ကျွန်ုပ်၏အကူအညီလိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ iphone 5S သည်အလွန်ဆိုးသည်၊ နှေးပြီးဘက်ထရီသည်အလွန်နည်းသည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးကူညီပေးပါ။ မင်္ဂလာပါ။
ဒံယေလ Carrasco ကိုပြန်ပြောပါ
Iphone အသုံးပြုသူ ဟုသူကပြောသည်
ဒီနေ့ငါကြိုးစားပြီးကံမကောင်းတာကအလုပ်မလုပ်ဘူး၊ အမှား ၃၁၉၄ ရပြီ။ Apple က IPhone အသစ်ကို ၀ ယ်မယ်ဆိုရင်ကုမ္ပဏီကမျှော်လင့်ထားတာကဒီဖြစ်နိုင်ခြေကိုပိတ်ထားပြီးပြီ။ 🙁
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ကျွန်ုပ်အဖြေကိုတွေ့ပြီ။ Android သို့ပြောင်းသည်။ သူတို့မှာတစ်ခုတည်းသောအရာကငါတို့ကိုမှားယွင်းသောဆိပ်ကမ်းများချန် ထား၍ အခြား ၀ ယ်ရန်အတင်းအကျပ်ပြုသည်၊ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်ကိုကျွေးမွေးပြီးသားဖြစ်သော်လည်းအပြောင်းအလဲကိုလုပ်ပြီးပြီ။
Carl 77 ဟုသူကပြောသည်
ငါ့မှာ Iphone6plus ရှိတယ်၊ ငါ iOS 10.3.3 ကိုပြန်ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် download စာမျက်နှာကဒီ firmware ကိုမလက်မှတ်ထိုးပါဘူး။ ဆိုလိုသည်မှာ iTunes တွင်၎င်းကိုသင်ပြန်မရနိုင်ပါ။
carl ကို 77 စာပြန်ပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင် ios6သို့မွမ်းမံသော iPhone 11 ရှိသော်လည်းနှေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဖြေရှင်းချက်မှာဘက်ထရီရာခိုင်နှုန်းနှင့်ပြandနာပိုမိုမြင့်မားသောအသစ်တစ်ခုအတွက်ဘက်ထရီကိုပြောင်းလဲရန်ဖြစ်သည်။ Processor ကို Unlock လုပ်ပြီးသားဖြစ်ပြီး ios11 မှာပြproblemsနာမရှိပါဘူး။
လူးဝစ် Miguel Rozo အက်ဖ် ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်တော့်မှာ6Gb IPHONE 64 ရှိပြီး version 11.3.1 ကိုသာ update လုပ်ပြီး၊ crash ဖြစ်သွားတယ်။ WIFi ကို unlock လုပ်ဖို့တစ်ခါတလေပိတ်ထားရတယ်။ ပြီးတော့ application အားလုံးကိုဖွင့်ဖို့သာရေးလိုက်တယ်။ သော့တွေ, ငါဖွင့်လှစ်ခဲ့သောအင်တာနက်ကိုဖွင့်လှစ်! touch screen အလုပ်မလုပ်လို့ငါ restart လုပ်ပြီးပြီ။ ပုံမှန်ထိတွေ့မှုသည်အလုပ်ပြန်လုပ်ပြီးအလုပ်ရှိပါကတို့ထိခြင်း၊ ခလုတ်နှင့်လက်ဗွေရာတို့ကိုထပ်မံပိတ်ဆို့ထားနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုဖေဖော်ဝါရီလ ၁၉ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ IOS 11.2.6 ၏နောက်ကျောဗားရှင်းနှစ်ခုသို့ကူးယူပါမည်
လူးဝစ် Miguel Rozo အက်ဖ်အားပြန်ကြားချက်